नेचाविहिबारे बजारको सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा आएन, किन ? (रिर्पोट सहित) – Himal FM 90.2 MHz
नेचाविहिबारे बजारको सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा आएन, किन ? (रिर्पोट सहित)
स्थानीय समाचार adminhimal November 3, 2018
सोलुखुम्बु, कात्तिक १७
साप्ताहिक बजार लाग्ने सोलुखुम्बुको नेचाविहिबारे बजारमा रहेको सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा नआउदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
बजार क्षेत्रको फरक फरक स्थानमा २ कोठे सार्वजनिक शौचालय रहेपनि प्रयोगमा नआएपछि बजार भर्न आउने सर्वसाधारणले पिसाव फर्नेकै लागि होटलपसल चाहर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कुनैपनि शौचालय प्रयोगमा नआएपछि दिशापिसावका लागि समस्या हुने गरेको स्थानीय व्यापारी राम बहादुर विश्वकर्माको भनाई छ । पुरानो शौचालय जाम हुने समस्याले नियमित प्रयोगमा आउन सकेको छैन् भने तत्कालिन जिल्ला विकास समितिवाट विनियोजित रकमवाट निर्मित दुई कोठे शौचालय पनि निर्माण पछि प्रयोगमै आएको छैन् ।
अहिले सो शौचालयको सेफ्टी ट्याङकी भएर गाडी गुड्दै आएको छ । कमजोर संरचनाकै कारण सवारी गुड्न थालेपछि ट्याङकीमा ठूला–साना प्वाल परेको छ । ट्याङकी भित्र कार्टुन, ढुंगा देखिन्छ भने मानिस नै पस्न सक्ने प्वाल परेकाले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ । बजेट अभावमा केहि गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष रमेश बास्तोलाले प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेचासल्यान गाउँपालिकाले शौचालय व्यवस्थापनको लागि भन्दै निर्माणको लागि सर्वे गरेपनि प्रक्रियाको बारेमा सर्वसाधारण अनविज्ञ छन् ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ३ का अध्यक्ष धर्मध्वज खत्रीले बजारमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा शौचालय संचालनको योजना बनाएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाको प्रवक्ता समेत रहनुभएका खत्रीले उपयुक्त जमिन नभेटिएकाले नयाँ शौचालय निर्माणमा समय लाग्ने र पुरानै शौचालयलाई अल्पकालिन रुपमा प्रयोगमा ल्याउने बताउनुभयो ।
फोटो सौजन्य- हाम्रो नेचा राम्रो नेचा